Iyi inogona kunge iri nyowani iPhone 7 nzvimbo nhema | IPhone nhau
Sezvo zuva rekuratidzira reiyo nyowani iPhone 7 ichisvika, zvinoita sekunge runyerekupe rwekuti shanduko mune terminal yaizove shoma iri kupera, uye mamwe anotanga kuoneka anopa tariro kune avo vanoda shanduko yekushongedza muchizvarwa chinotevera Apple mafoni. Kutanga raive rakasviba bhuruu ruvara uye ikozvino nzvimbo dema ruvara, rakafanana neiyo iyo iPhone 5 yaive iinayo kana iyo izvo izvozvi ine dema Apple Watch, uyezve neshanduko senge capacitive kutanga bhatani neFoot Touch. Martin Hajek, sekugara achitibatsira kuti tione kuti iyi iPhone nyowani ingatarise sei mumifananidzo iyi yakanaka.
Ruvara rutsva rweiyo iPhone yaisazove nyowani, nekuti iyo iPhone 5 yaive yatovepo muiri dema dema, Apple isati yasarudza kutipa chete chete kana zvishoma rima grey senge imwe nzira. Iyi nzvimbo nhema ine rakasviba kwazvo grey antenna mabhendi anotaridzika kusheedzera, uye zvinogona pachayo kukurudzira kwakanaka kune vazhinji pavanofunga kushandura chinouraya. Asi hazvisi izvo chete zvakasara ipapo, nekuti zvinogona zvakare kusanganisira bhatani idzva rekutanga, iro raisazobatanidzwa muchiratidziri, sezvavanotaura kuti zvinogona kuitika neiyo iPhone 8 ya2017, asi yaizorega kuve bhatani rakadaro , uye yaizofanana neMacbook trackpad, chidimbu chakavakirwa kumberi kweiyo iPhone, chine hanya nekumanikidza, asi izvo zvaisazofamba, kunyangwe zvaizo "dedera" sezvinoita Apple trackpad nyowani izvozvi.
Hajek anopedza kupedzisa yake yakakosha iPhone modhi ne Mheni mahedhifoni mune nhema, iyo ingave iri itsva paApple yaishandiswa kuchena kuve iwo mucheka wezvishongedzo. Zvakanakisa kushamisa, iwe unofungei? Mimwe mifananidzo pazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Iyi inogona kunge iri nyowani iPhone 7 nzvimbo nhema
Runako sekugara kwarwo kunge rwaisanganisira tambo nhema uye mahedhifoni. Ndakafanirwa kutenga tambo dema dzekuchaja / dzekubatanidza dzeangu idevices uye mamwe maheti madema eSeinheiser ayo anoyevedza kupfuura machena anouya akajairwa.
Sezvo inotevera iPhone 7 ndizvo zvandinozviwana !!!!
Apple inopindura kupomerwa kweSpotify